စင်ကာပူ နိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ဆရာ”ဝီးကီး” (Wikipedia) နဲ့ စီအိုင်အေ CIA တို့ရဲ့အမြင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » စင်ကာပူ နိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ဆရာ”ဝီးကီး” (Wikipedia) နဲ့ စီအိုင်အေ CIA တို့ရဲ့အမြင်
စင်ကာပူ နိုင်ငံ ရဲ့ ကုန်သွယ်မှု နဲ့ဆရာ”ဝီးကီး” (Wikipedia) နဲ့ စီအိုင်အေ CIA တို့ရဲ့အမြင်
Posted by Kyaemon on Dec 5, 2011 in Business & Economics, Education, Think Different |5comments
CIA Factbook Singapore Wikipedia
” မလေး၊ စင်္ကာပူတို့လို့ လူလည်ကြီးများ မပြောနဲ့ အမေရိကန်နဲ့ စစ်တိုက်ခဲ့တဲ့ ဗီယက်နမ်တောင် တရုတ်ကြီးနဲ့ ရန်ဖြစ်ပြီး အမေရိကန်နဲ့ ပြန်ပေါင်းလိုက်တာ စီးပွားရေး တဟုတ်ထိုး တိုးတက်နေပါတယ်။ “
မလေးရှား နဲ့စင်္ကာပူတို့က “လူလည်ကြီးများ” လို့တင်စား ထားတာ
အမေရိကန်နဲ့ ပြန်ပေါင်းလိုက်တယ် လို့ဆိုတဲ့ ဗီယက်နမ် ထက်တောင် “လူလည်”ကျ တာကို ဆိုလိုဟန်တူတယ်
အဲ ဒီလို “လူလည်” ကျ လို့ ၊ တနည်းပြောရရင်၊ အမေရိကန်တို့ အနောက်နိုင်ငံတို့နဲ့ ကုန်သွယ်လို့ သူဌေးနိုင်ငံတွေ တဟုန်ထိုး ဖြစ်ခဲ့ကြတာကိုဆိုချင်တာပါဘဲ
ရှေ့ပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တဲ့အတိုင်းဘဲ မလေးရှား အကြောင်း ကြည့်လိုက်တော့ အဲ ဒီလို “လူလည်” ကျတာတော့ မတွေ့ရတာအမှန်ဘဲ
အိမ်နီးနားချင်း နဲ့အရှေ့အာရှ နိုင်ငံ နဲ့ဘဲကုန်သွယ်တာများပြီး
အမေရိကန် တို့ နဲ့ ကုန်သွယ်တာ ၁၀ % လောက်
အနောက်နိုင်ငံတို့ နဲ့မ ရှိသလောက်ဘဲ
စင်ကာပူ နိုင်ငံရော ဘယ်လို နေ လဲ
အိမ်နီးနားချင်း နဲ့အရှေ့အာရှ နိုင်ငံနဲ့ဘဲကုန်သွယ်တာများ ပြီး
အမေရိကန်တို့ နဲ့ ကုန်သွယ်တာဆိုရင် တင်ပို့ကုန်တွေရဲ့ ၆.၅% သာ ရှိပြီး သွင်းကုန်ကြတော့ ၁၁.၅ % ဘဲ
စိအိုင်အေ မှတ်တမ်းကျ တော့ ၁၁.၂ % နဲ့ ၁၄.၇ %ဘဲရှိ ကြတာ
အနောက်နိုင်ငံတို့ နဲ့ ဆို တင်ပို့ကုန်ရော သွင်းကုန် ရော မ ရှိသလောက်ဘဲ
“လူလည်” လို့ခေါ်မဲ့အစား “လူ အ” လို့ခေါ်ရ မလား စဉ်းစားစရာ ဖြစ် တော့တာ
“လူ အ” လို့ခေါ်ရ လောက်အောင်သူ့ရဲ့ တဦးချင်းဝင်ငွေ ကိုကြည့်လိုက်ရင် အများသိတဲ့အတိုင်းပါ
မြန်မာထက် ၃၁ ဆ လောက်ရှိပြီး မလေးရှား ထက် ၃.၅ ဆ လောက်ရှိတာ
ဘယ်လိုဘဲ ပြောပြော သယံဇာတ သိပ်လဲမရှိဘဲနဲ့
အနောက်နိုင်ငံတို့အမေရိကန်တို့နဲ့ကုန်သွယ်မှု ထက် အိမ်နီးနားချင်း နဲ့အရှေ့အာရှ နိုင်ငံတွေနဲ့ဘဲကုန်သွယ်တာများ ပြီး
အကြောင်းရင်း အကြောင်းစုံ ကိုဆက်လက်ပြီး စူးစမ်းရှာဖွေ ဆည်းပူးရမှာ ပါ
Malaysia 11.9%, Hong Kong 11.7%, China 10.4%, Indonesia 9.4%, United States 6.5%, Japan 4.7%, South Korea 4.1% (2010 est.)
Malaysia 11.7%, United States 11.5%, China 10.8%, Japan 7.9%, South Korea 5.8%, Indonesia 5.4% (2010 est)
Singapore Economy 2011, CIA World Factbook
သေရေးရှင်ရေးတမျှ အရေးပါတဲ့ အီးယူထိပ်သီးညီလာခံ အသွင် ကနေပြီး၊ နိုင်ငံ တစ် နိုင်ငံက တဘက်၊ ကျန် ၂၆ နိုင်ငံ တို့က နောက်တဘက် ဖြစ်ကြကာ ရင်ဆိုင်ကြ အားပြိုင်ကြရတဲ့ အသွင်သို့ပြောင်းလဲသွား
News Analysis: Do-or-die EU summit turns into one-vs-26 standoff
Speaking to reporters early Friday morning, Sarkozy said he would have preferredatreaty change involving all 27 EU states, but “that wasn’t possible taking into account the position of our British friends.”
He said Cameron asked for “something we all judged unacceptable – foraprotocol to be inserted into the treaty granting the United Kingdomacertain number of exonerations on financial services regulations.”
This is not the first public clash between the French and British leaders, who used to be close allies over the Libya situation only months ago. Inameeting of all 27 EU leaders in October, Sarkozy told Cameron to stop lecturing continental Europe on debts.
UK ယူကေ က အထီးကျန်ရစ် ပြီး၊အခြားနိုင်ငံများ က သဘောတူ စာချုပ်ကြ
နိုင်ငံတခုမှမကျန်အောင် နိုင်ငံအလုံးစုံ သဘောတူညီ ရအောင် (၁၀) နာရီကြာ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးသော်လည်းမအောင်မြင်လိုက်
BBC News – Euro crisis: UK alone as Europe agrees fiscal compact
The UK effectively used its veto to block an attempt, led by the French and Germans, to get all 27 EU states to support changes to the union’s treatie
French President Nicolas Sarkozy said the sticking point had been Mr Cameron’s insistence onaprotocol allowing London to opt-out on proposed change on financial services.
But the announcement from Brussels failed to lift the markets, which are still hoping for more intervention by the European Central Bank (ECB), and European stocks traded slightly down on
ပြီးခဲ့တဲ့ ကြာသပတေးမှာ ချုပ်ဆိုခဲ့တဲ့ ဥရောပ နိုင်ငံများစာချုပ်က လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ ငွေကြေး မလည်ပတ်မှု ကို မဖြေရှင်းပေး နိုင်
New European Treaty Won’t Solve Current Liquidity Crisis
To shore up those institutions, the European Central Bank would have to take more drastic action by buying up large amounts of government debt. And so far it’s been unwilling to do that. On Thursday, ECB President Mario Draghi said that he was “surprised” by some observers’ interpretation of his Dec. 1 comments that the ECB might buy large amounts of government debt.
The agreement must be approved by the individual countries’ legislatures, which could take three months, according to Reuters. It’s unlikely that the ECB would step in to offer more aid until the pact has been ratified.
Some observers said that the ECB is deliberately delaying large bond purchases in order to extract as many concessions from European governments as possible. “It’s been brinksmanship,” said Diane Swonk, senior managing director and chief economist at Mesirow Financial. “It’s an important negotiating lever, and it’s important to understand, but it also doesn’t rule out that they will do more.”
Draghi hailed the agreement in Brussels, saying, “It’s going to be the basis foragood fiscal compact and more discipline in economic policy.” But he did not hint at any further government bond purchases.
Borrowing costs for troubled European countries eased slightly after the announcement of the agreement, but not nearly enough to stem the liquidity crisis. On Friday, interest rates on 10-year Italian government debt fell to 6.85 percent, and interest rates on 10-year Spanish government debt fell to 5.77 percent, according to Thomson Reuters. Economists say that interest rates of about7percent are ultimately unsustainable. Countries such as Italy, Spain and Portugal need interest rates on their long-term debt to fall to about4percent for their debt burdens to be ultimately sustainable, according toaJuly report by Wells Fargo Securities…,
“It’s disturbing because the problem has not been solved, but they think they have solved it,” Economides said of Thursday’s agreement…
ယူအက်စ်နိုင်ငံသားကိုပစ်.. စင်္ကာပူနိုင်ငံသားများ လုပ်မလားပဲ..
တကယ်တော့ သူက.. ယူအက်စ်မှာမွေးတဲ့သူလည်းမဟုတ်ပါဘူး.. ဘရာဇီးမှာမွေးခဲ့တာ..
Eduardo Saverin was born in São Paulo, Brazil, toawealthy Jewish Brazilian family, and was raised in Miami, Florida. Eduardo’s father wasaBrazilian industrialist working in export, clothing, shipping, and real estate.
By John D. McKinnon –5hours ago
[More from WSJ.com: How Facebook’s Elite Skirt Estate Tax]
ကြေးမုံဂျီးလည်း ဦးကြောင်ဂို ပစ်သွားဃဲ့ဘီ.. သို့ဘေမဲ့ ခြစ်နေဇဲဘာ။ ကြောင်ကြီးဂို ခွေးမလွှတ်ချင်နေဘာ.. အမှားဝင်ချတောင်းဘံပီး နာမည်အသုံးအနှုန်း ပြောင်းခေါ်ပေးဏေဒါဂိုဒေါ့ အသိအမှတ် ပြုသင့်ဘာဒယ်..။ ယံသူဒွေတောင် လပ်နတ်ချဒဲ့အခါ အပျစ်မယူ ကြေအေးဂျသေးဒါဘဲ..။
ဆာပျံဘာ..တချိမ်ဂ ချစ်ကြောင်ကြီး :neutral: